Vaovao - Famaritana fohy momba ny mpankafy EC
EC mpankafy dia vokatra vaovao amin'ny indostrian'ny mpankafy. Tsy mitovy amin'ireo mpankafy DC hafa io. Tsy vitan'ny hoe mampiasa herinaratra angovo DC fotsiny, fa koa famatsiana herinaratra AC. TOSIKARATRA avy amin'ny DC 12v, 24v, 48v, mankany AC 110V, 380V dia mety ho universal, tsy mila manampy fiovam-po inverter. Ny motera rehetra misy singa anatiny aotra dia ny famatsiana herinaratra DC, DC mankany AC, fananganana toerana misy ny rotor, AC dingana telo, andriamby maharitra, motera mifanindry.
Tombon'ny mpankafy EC:
Ny motera EC dia motera tsy misy fikojakojana DC miaraka amina modely fanaraha-maso manan-tsaina. Izy io dia miaraka amin'ny interface interface RS485, interface interface output 0-10V, interface interface output haingam-pandeha 4-20mA, interface output output fitaovana alarm ary interface interface output signal master-budak. Ny vokatra dia manana ny mampiavaka ny faharanitan-tsaina avo, ny fitsitsiana angovo avo lenta, ny fahombiazana avo lenta, ny fiainana lava, ny fihoarana ny feo, ny tabataba ambany ary ny asa mitohy sy tsy tapaka:
Ny maotera DC tsy misy borosy dia nanamora ny firafitra satria nesorina ny peratra fanangonana sy borosy ho an'ny fientanam-po. Mandritra izany fotoana izany dia tsy ny fanamboarana môtô ihany no mihatsara, fa ny fahamendrehan'ny maotera ny fiasan'ny maotera dia nohatsaraina tokoa, ary nitombo ny fiainam-panompoana.
Mandritra izany fotoana izany dia azo hatsaraina ny haben'ny andriamby, ary ny tondro môtô dia afaka mahatratra ny endrika tsara indrindra. Ny vokatra mivantana dia mihena ny habetsaky ny motera ary mihena ny lanjany. Tsy izany ihany fa raha ampitahaina amin'ny motera hafa dia manana fahombiazan'ny fifehezana tena tsara koa izy io. Izy io dia satria: Voalohany, noho ny fahombiazan'ny fitaovana maotera maharitra, dia mihatsara fatratra ny toriteny tsy miova, ny tahan'ny inertia torque, ary ny hakitroky ny motera. Amin'ny alàlan'ny famolavolana antonony, ny index toy ny moment of inertia, ny fotoana maharitra ny herinaratra sy ny mekanika dia azo ahena be, satria ny index lehibe indrindra amin'ny fanatanterahana servo dia nihatsara. Faharoa, ny famolavolana ny circuit magnet andriamby maharitra maoderina dia somary feno ary ny faneriterena ny akora maneto maharitra dia avo, ka ny fanehoan-kevitra manohitra ny fitaovam-piadiana sy ny fahaizan'ny anti-demagnetization an'ny motera magnet dia maharitra nohatsaraina. Mihena be ny fiantraikan'ny fikorontanana. Fahatelo, satria ny andriamby maharitra dia ampiasaina fa tsy ny fientanentanana elektrika, mihena ny famolavolana ny fiolahana fifaliana sy ny sahan'andriamby, ary maro ny masontsivana toy ny fientanentanana, ny fantsom-piakarana mihodina, ary ny fientanentanana amin'izao fotoana izao no mihena, amin'izay mampihena mivantana ireo miovaova azo ovaina na masontsivana. Miorina amin'ireo lafin-javatra etsy ambony ireo, dia azo lazaina fa ny maotera maotera maharitra maharitra dia voafehy tsara.
Metal Fan Guard, Guard Fan Plastika, Hvac Fan Puller, 172mm Ac Axial Fan, Metal Grill Fan 80mm Guard, 12cm Ac Axial Fan,